Ebumnuche CEPAI bụ na ndị ọrụ niile na-elekwasị anya na mma, iji hụ na ngwaahịa nke CEPAI mere enweghị ntụpọ, gbalịa ike anyị niile iji mezuo ihe ị chọrọ
Mpụga uwe onu Chock ...
Metal Abụọ-Ibe sere n'elu Ba ...
Abụọ mpempe akwụkwọ edozi bọl valvụ
Mpempe Ihe Ntinye Trunnion Abụọ abụọ nke CEPAI mepụtara ka a na-ejikarị eme ihe iji gbochie ma ọ bụ jikọọ usoro ahụ na pipeline. Họrọ Mpempe Nkedo Trunnion Ball abụọ nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Abụọ ibe esorowo ofu bọl valvụ
Abụọ Mpempe Akwụkwọ Trunnion Ball Valve nke CEPAI mepụtara ka a na-ejikarị eme ihe iji gbochie ma ọ bụ jikọọ usoro ahụ na pipeline. Họrọ ụzọ abụọ esororo Trunnion Ball valvụ nke dị iche iche ihe nwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, liquefied gas, eke gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ na-ajụ.
Atọ mpempe akwụkwọ edozi bọọlụ atọ
Mpempe Mpempe Mpempe Atọ Atọ nke CEPAI mepụtara nke CEPAI na-ejikarị eme ihe iji gbochie ma ọ bụ jikọọ onye na-ajụ ajụ na pipeline. Họrọ Mpempe Atọ Atọ Trunnion Ball Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Atọ mpempe esoroghị ofu bọl valvụ
Mpempe Mpempe Akwụkwọ Mpempe Trunnion atọ nke CEPAI mepụtara ka a na-ejikarị egbochi ma ọ bụ jikọọ onye na-ajụ ajụ na pipeline. Họrọ Mpempe Atọ mepụtara Trunnion Ball Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Igba ígwè siwing ego valvụ
Ihe nkedo nlele nkedo a na emeputa nke CEPAI bu ihe eji eme ihe iji gbochie ma obu jikota ndi ozo na pipeline. Họrọ Cast Swing Check Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Esorowo ígwè inwego elele valvụ
Ejiri Piston Check Valve mepụtara nke CEPAI mebere iji gbochie ma ọ bụ jikọọ onye na-ajụ ya na pipeline. Họrọ Ejiri Piston Check Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Ugboro abụọ diski ego valvụ
A na-ejikarị Valve Check Valve nke CEPAI mepụtara iji gbochie ma ọ bụ jikọọ ọkara na pipeline. Họrọ Mpempe Nyocha abụọ nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Nkedo ígwè ụzọ ámá valvụ
A na-ejikarị Cast Gate Valve nke CEPAI mee ihe iji gbochie ma ọ bụ jikọọ usoro ahụ na pipeline. Họrọ Cast Gate Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Ejirila ọnụ ụzọ ámá ígwè
A na-ejikarị Valve Gateve nke CEPAI mepụtara iji gbochie ma ọ bụ jikọọ ọkara na pipeline. Họrọ Ejirila ọnụ ụzọ ámá valvụ nke dị iche iche ihe nwere ike ji mee ihe maka mmiri, uzuoku, mmanụ, liquefied gas, eke gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ na-ajụ.
Igba ígwè ụwa valvụ
A na-ejikarị Cast Globe Valve nke CEPAI mepụtara iji gbochie ma ọ bụ jikọọ ọkara na pipeline. Họrọ Cast Globe Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, ikuku gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
Esorowo ígwè ụwa valvụ
A na-ejikarị Fordge Globe Valve nke CEPAI mepụtara iji gbochie ma ọ bụ jikọọ usoro ahụ na pipeline. Họrọ Fordge Globe Valve nke ihe dị iche iche enwere ike iji maka mmiri, uzuoku, mmanụ, gas na-egbu mmiri, ikuku gas, gas, nitric acid, carbamide na ndị ọzọ.
A na-emepụta valvụ ọnụ ụzọ ámá FC, nke arụmọrụ dị elu na akara akara na-arụpụtara, dịka nke teknụzụ kachasị elu n'ụwa. Ọ bụ a counterpart nke FC n'ọnụ ụzọ ámá valves na-enye pụtara ezi arụmọrụ n'okpuru elu nsogbu ọrụ. Ọ dị mkpa maka isi mmanụ na gas, osisi Krismas na ịkpagbu ma gbuo ọtụtụ ihe gosiri 5,000Psi ruo 20,000Psi. Enweghị ngwaọrụ pụrụ iche achọrọ mgbe ọ bịara dochie ọnụ ụzọ ámá valvụ na oche.